Umuaka umuaka 5 kacha mma maka gam akporo | Gam akporosis
Mụ ọhụrụ na-anọchite anya mmalite anyị na ndụ, nke mere na ha enweghị enyemaka ma chọọ nnukwu nlebara anya na nlekọta maka uto ahụike. Ọ dịghị mfe ilekọta otu, ma pere mpe ma ọ bụrụ na anyị na-ekwu maka ọtụtụ n'otu oge. Agbanyeghị, a na-enyere ọrụ a aka nke ukwuu ma ọ bụrụ na anyị nwere ngwa ga-enyere anyị aka ilekọta, lekọta ma lekọta ụmụ ọhụrụ.
Kpamkpam n'ihi nke a bụ na anyị na-ewetara gị ọkwa a, nke ị ga-ahụ ọtụtụ ngwa maka ụmụ ọhụrụ Ebumnuche nke ya bụ inyere gị aka ilekọta ya ma lekọta ya anya, yana ọrụ ịgbaso dị ezigbo mkpa, ma karịa nke ahụ maka ndị nne na nna ahụ bidoro chọrọ ịnye nlekọta kacha mma maka ụmụ ha.
N'okpuru ebe anyị na-ewetara gị usoro nke ngwa 6 kachasị mma maka ụmụ ọhụrụ maka igwe gam akporo. Okwesiri ighota, dika anyi na eme, na ndị niile ị ga-ahụ na mkpokọta akwụkwọ a bụ n'efu. Ya mere, ị gaghị akpa ụdị ego ọ bụla iji nweta otu ma ọ bụ ha niile. Agbanyeghị, otu ma ọ bụ karịa nwere ike ịnwe sistemụ nkwụnye ego dị n’ime, nke ga-enye ohere ịnweta nnabata ọdịnaya n’ime ha, yana atụmatụ adịchaghị mma na nke dị elu. N'otu aka ahụ, ọ dịghị mkpa ịkwụ ụgwọ ọ bụla, ọ bara uru ịmeghachi. Ugbu a ee, ka anyị gakwuru ya.
1 Baby Jikọọ
2 Trachọgharị ụmụaka - Nri nri na imebe ya
3 Akwụkwọ ụmụaka
4 Akwụkwọ Daybọchị Babymụaka - feedingfeedingụ ara na nlebara anya
5 Inye ara
Anyị na-amalite na Baby Jikọọ, ngwá ọrụ nke ọ dị mfe iji na-esochi nwa gị, dịka o nwere ọtụtụ ngalaba, njirimara na ọrụ maka nke a, na otu ihe pụtara ìhè bụ nke njikwa njikwa na ọgwụ mgbochi, nke enwere ike ịlele site na eserese, yana mmalite nke nwa ọhụrụ, nkezi izu, ọgwụ na ihe ndị ọzọ.
Ngwa a nwere elekere nkwụsị, ọkwa na ncheta nke ahụ ga - edobe gị oge, ohere izipu ozi ịntanetị na izipu data nwa ahụ na ihe niile ị chekwara na ngwa ahụ. Ọ na-etinyekwa n'aka gị ihe dị mfe iji yana data na-akparaghị ókè, yabụ ọ na-enye ohere nlekota nwa ahụ n'oge uto ya, mmepe ya na usoro mmalite ya ruo oge nwata.
Nwere ike ịmepụta ndekọ, dee ọrụ, atụmatụ, were foto, soro ụra na ihe niile metụtara ya, zipụ ozi, ịtọọ oge ọrụ ma nwee ike ịchịkwa oge nri na oge nri, yana ibu, nha na ndị ọzọ.
N'otu oge ahụ, ọ na-enye ohere ịkekọrịta data na ọganihu nke nwa ọhụrụ ya na onye òtù ọlụlụ (nwunye ma ọ bụ di), onye na-elekọta ụmụaka, pediatrician na ndị ọzọ. Na mgbakwunye, o nwere weebụsaịtị, nke bụ www.babyconnect.com, ebe ị nwere ike ịchekwa ozi niile, evolushọn na data echekwara. I nwekwara ike ịnweta akaụntụ gị site na ekwentị ndị ọzọ. Baby Jikọọ bụ ezigbo ngwa dị iche iche iji debe nwa gị.
Developer: Software Seacloud
Trachọgharị ụmụaka - Nri nri na imebe ya
Nke a bụ ngwaọrụ ọzọ dị mma iji lekọta ma lekọta nwa gị anya, ebe ọ na-enyere gị aka na usoro ya na ọrụ ya niile. Ọ nwere ọrụ dịka ụra na oge nri, ka ị nwee ike, dịka ọmụmaatụ, nweta oge kachasị mma nwa gị ga-ehi ụra, dabere na oge ụra na-ehi ya, yana ogologo oge inye ara ara dị mma. .
N'ezie, dịka ngwa ọ bụla dị mma maka ileba anya nwa, mmepe na uto ya, Ọ na-abịa site na ncheta na ọkwa ga-agwa gị mgbe ị ga-eri ya na ndị ọzọ. O nwekwara ngalaba maka ndebanye nri nke nwa ahụ, nke ị nwere ike iji kalenda na-enye nwa ara ka ịdekọ oge oge nri ọ bụla, dee nri niile na karama (mmiri ara ara, mmiri ara ehi ntụ, mmiri ara ehi na mmiri ara ewu. n'etiti ndị ọzọ) ma rịba ama nzaghachi ya na nri siri ike (mmasị ma ọ bụ mmeghachi omume nfụkasị).
Ọzọkwa -enyere gị aka ịchịkwa ole diapers ị na-agbanwe kwa ụbọchị, ka i wee nwee ike ijikwa ihe oriri ndị a nke ọma na nwa gị anaghị echegbu diaper na-adịghị ọcha ogologo oge, ebe ọ bụ na nke a ga-eme ya mkpesa ma malite ịkwa ákwá. N'otu oge ahụ, ngwa a na-edekọ nsị na nsị nke nwa gị, nke nwere ike inyere gị aka ịdebe nwa gị ma ọ bụrụ na ọ nwere afọ ọsịsa ma ọ bụ mmiri pụrụ ịgwụ.
Ọ na - enye gị ohere ịkọrọ onye ọlụlụ gị, ndị ezinaụlọ na ndị enyi niile agam n’ihu, evolushọn na data nke nwa ahụ nwere ihe jikọrọ ya na ndekọ nke ụra, nri, akparamaagwa, ihe omume na ihe ndị ọzọ, yana Mekọrịta data niile dị na ngwa na ọtụtụ ngwaọrụ n'otu oge.
Ihe ọzọ bụ na ị nwere ike mfe na-esochi nke nha na ibu ibu na a pụtara mfe ngalaba. Ngwa a na-enye gị ohere inyocha mmepe nke nwa ahụ ma jiri ya tụnyere ụwa. Ihe ọzọ bụ na o nwere eserese ị nwere ike idozi maka ụmụaka akaghi aka.
Nlekọta --mụaka - Nri na Mgbanwe Diaper bụ ngwa bara ezigbo uru ma na-agbanwe agbanwe maka nlekọta na nlebara anya nke nwa ọhụrụ. Ọ bụghị maka ihe ọ bụla, o nwere ihe karịrị nbudata 100 na Storelọ Ahịa Play na akara ngosi 4.7, nke dabere na ọtụtụ puku okwu ọma banyere ọrụ niile ọ na-enye.
Developer: Ahụike Dị mfe
Ọ baghị uru ma ọ bụrụ na ị lụrụ di ma ọ bụ nwunye ọhụrụ ma ọ bụ n’enweghị ahụmahụ ma ọ bụ na ị maghị. Baby Diary bụ ngwa na-emejupụta ọrụ na ebumnuche ndị yiri nke ndị ahụ a kpọtụrụ aha n'elu nyere, ya mere edepụtara ya dịka ezigbo ngwaọrụ iji lekọta, lekọta ma zụọ nwa gị.
Na Baby Diary ị nwere ike idebe usoro zuru oke na nri nwa ahụ site na nri siri ike, ụdị nri ọ na-eri na ego ọ na-eri kwa ụbọchị. nwekwara ike ndekọ karama nri na soro onye ọ bụla ara kwa nri, ma obu jiri ha abuo, ma oburu na i jiri ara ara zuo nwa gi n’otu oge ara. Ọ bara ezigbo uru na nke a.
Ọrụ ọzọ nke bara oke uru maka ọtụtụ ndị nne bụ na-edozi ole mmiri ara ehi ma ọ bụ oz nke mmiri ara ehi ewepụtara maka ara ọ bụla. Tụkwasị na nke a, ọ nwere atụmatụ na-enye gị ohere ịgbaso mgbanwe mgbanwe ahụ, ma ọ bụrụ na ha ruru unyi, mmiri ma ọ bụ ha abụọ, yana ole diaper na-agbanwekarị kwa ụbọchị, nke na-enyere aka ịnweta njikwa ka mma nke ndị a. Ihe ọzọ bụ na ọ na-abịa site na inye ara na oge ụra, ọ dị mfe ịkwụsị ma tọgharịa.
Gaghị echefu nlekota nha na ịdị arọ, ihe dị mkpa iji mata etu nwa si etolite kwa ụbọchị, izu kwa izu na ọnwa n'ọnwa. Ọzọkwa, dị ka a ga - asị na nke ahụ ezughi, Ọ na-abịa site na ncheta na ọkwa nke ihe omume ị mere na mbụ site na ngwa ahụ. Maka nke a na ndị ọzọ, Baby Diary bụ ngwa ọzọ dị mma iji debe obere na ngwa ọrụ dị ukwuu maka ndị nne ọhụụ na ọbụlagodi ndị nwerela ahụmịhe.
Akwụkwọ ụmụaka. Mmiri ara 👶
Akwụkwọ Daybọchị Babymụaka - feedingfeedingụ ara na nlebara anya
Ngwa ọzọ magburu onwe ya maka nlekota na nlekọta nke nwa bụ, na-enweghị mgbagha, Day Day Baby. Ma ọ bụ na ngwá ọrụ a maka ndị nne nwere ihe niile ịchọrọ maka nlekọta nwa na ọbụna maka ụmụ amụrụ ọhụrụ.
O zuru oke maka ịdekọ ihe omume niile nke nwa ọhụrụ, dị ka nri gị, ụra, oge ezumike na ọtụtụ ndị ọzọ. O nwere mpaghara ndekọ na ndetu, yana nchịkọta kwa ụbọchị nke ihe niile edere ma mee site na nwa ahụ na-enye gị ohere ịhụ ọnụ ọgụgụ ma jiri aka dị mfe nyocha ihe ndị ahụ, nke ga - enyere gị aka ịghọta ya karịa ma, ya mere, gaa ma lekọta ya ọ kacha mma.
Ọrụ nke ngwa a na-enye gị ohere ịma ihe dịka ogologo oge ọ bụ kemgbe oge ị nyechara nwa gị nri, ma ọ bụrụ na ọ hie obere ụra na oge ole, akwa ole agbanweela n'ụbọchị na ọtụtụ ihe ndị ọzọ. Nke a na - enyere gị aka ijikwa oge gị nke ọma, yana nke nwa, n'ezie.
N'aka nke ọzọ, iji Baby Daybook ị nwere ike iburu a nlekota nke ara, karama (usoro), ihe ọ drinkụ drinkụ, nri siri ike, ụra, mmiri ara ehi okwu, bath na nlekota ọgwụ. N'otu oge ahụ, ọ na-enye gị ohere ịdebe ogo na ogo nwa ahụ, yana data ndị ọzọ gbasara uto na mmepe ya.
Can nwere ike ịdebe ihe karịrị otu nwa (ihe dị mma ma ọ bụrụ na ị nwere ejima, dịka ọmụmaatụ). N'aka nke ọzọ, ọ bụrụ n'ịchọrọ inwe ọtụtụ mmekọrịta nke ọtụtụ ngwaọrụ, ịnwere ike ịnweta ụdị adịchaghị.
Iji mechaa mkpokọta nke ngwa kacha mma maka ụmụ ọhụrụ n'ụkwụ aka nri, anyị na-ewetara gị ara ara, ngwa ọzọ maka nlekota nwa ọhụrụ nke nwere ọpụrụiche na ndebanye aha nke nri nwa.
Ngwaọrụ nne ọhụrụ a bụ ezigbo nkwado maka nlekọta nwa na nlekọta dịka ọ na - enyere aka ịdekọ ara ma ọ bụ inye karama, ara ara, mgbanwe diaper na ndị ọzọ.
Ọ na - enye gị ohere ịdekọ data ndị ọzọ dị oke mkpa banyere nzụlite nwa wee bịa na ncheta, ọkwa na ihe ndị ọzọ ga - enyere gị aka na ahụmịhe mbụ nke ịbụ nne.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Umuaka umuaka 5 kacha mma maka gam akporo